China TCD Cyclo Vortex Pump (Repalce TC) mpanamboatra sy mpamatsy | damei kingmech pump
Fahafahana: 3-1400m3 / h
Ny TCD Pumps dia natao manokana hampiasaina tsy tapaka amin'ny rindranasa karazana slurry miaraka amina sombin-javatra marefo na marefo. Ity karazana paompy vortex ity dia mahazaka poti-javatra lehibe sy malefaka ihany koa, indrindra fa ny fahasimban'ny sombintsombiny ahiana. Ny piraofilina anatiny be dia be, miaraka amin'ny endrika fametahana impeller misokatra, dia mampihena ny fifangaroan'ny vongan-tsokosoko ary mametra ny fikatsoana mety hitranga.
Volavola sy endri-javatra tsy manam-paharoa
1. Ny famolavolana metaly rehetra tsy mitongilana amin'ireo singa mando dia mety amin'ny famolavolana endrika mitsivalana sy mitsivalana.
2. Ny famolavolana impeller tokana recessed dia manangana vortex anatiny, izay mamindra ny angovo amin'ny mpanelanelana voatoto. Io famindrana angovo "malefaka" io dia mametra ny habetsahan'ny fahasimban'ny sombin-javatra raha ampitahaina amin'ny paompy mahazatra.
3. Ny fantsona sy fivoahana mitovy habe amin'ny habaka dia mamaritra ny haben'ny sombiny farafahakeliny izay zakan'ny paompy ny famerana ny mety hikatona mety hipoitra rehefa mipaoka poti lehibe.
4. Ny volavolan-tsolika be dia be dia mampihena ny hafainganam-pandeha mampihena ny fahasosorana sy ny fahasimban'ny sombintsombiny.
5. Ny fivondronan'ny fiakarana matanjaka, izay misy rantsam-panakodia mavesatra, ny fantsom-baravarana faran'izay kely indrindra ary ny savaivony goavambe dia manome anjara biriky amin'ny fikorontanana maimaimpoana na amin'ny fikirakirana marindrana na mitsangana.
6. Ny fivorian'ny firakotra "-10" (dash 10) tsy manam-paharoa misy V-Seals, peratra piston roa ary flinger ivelany misy labyrint vita amin'ny menaka diloilo dia fenitra amin'ny fivorian'ny fitifirana.
7. Ny fahazoana ny fikarakarana spindle mitsangana dia fenitra ary ny halavan'ny zorony dia miovaova arakaraka ny fari-paompy WarmanVSD (SP) sy VSDR (SPR) mahazatra.
Adidy amin'ny famindrana karbaona
Maloto sy mahomby
Andraikitra ambany volo
Previous: Paompy azo atsofoka SSD
Manaraka: VFD Vertical Froth Pump (Repalce AF)
Modely API610 OH4 Pump RCD
Paompy API610 BB5 (DRM)
Paompy dredge DGD ho an'ny paompy fasika sy vatokely (Repal ...